Ukuzenzakalela kwe-PPC: Amagama angukhiye aHamba Ngasendle | Martech Zone
Ezinyangeni ezimbili ezedlule, sezwa ngenkampani eyayikhona ukubhida ngamagama angukhiye angaphezu kwesigidi. Abantu bezentengiso benkampani babecabanga ukuthi lokhu kuhle impela. Ngempela?
Uma umuntu enesabelomali esikhulu se-PPC, yini okungaba yiphutha ngokubhida ngamagama angukhiye amaningi kangaka? Ukugcizelelwa kwemidlalo ebanzi, "ye-Fat Head", akukho ukuthunyelwa kwamagama angukhiye we-Negative, nokusetshenziswa ngokungakhethi kwe-automation / Dynamic Keyword Insertion kuholela ekubonisweni kokukhangisa okungasebenzi / okuyishwa.
Onyakeni owedlule, ngesikhathi benza uphenyo ku-inthanethi lokuthola ingane, omunye wabacebisi bethu be-PPC wahlangana nesikhangiso esithi "Babysitters for sale or rent!"
Kokuhlangenwe nakho kwethu, izikhangiso ezinjalo zenziwa ngokuzenzakalela ngamathuluzi akhiqiza amagama angukhiye ngokususelwa kusesho lwangempela nezikhangiso zombhalo ezijwayelekile. Ngakho-ke, ugcina unamaqembu wesikhangiso aqukethe inani elihlekisayo lamagama asemqoka (izinkulungwane ngezinkulungwane, imvamisa engahlobene) nemikhankaso ye-PPC esondele kakhulu ekuphatheni kahle noma ekulawuleni.
Nazi ezinye izibonelo zakamuva:
Ukusesha boy kubangele ukunikezwa kwe- “Discount Boy on Sale!” lapho inkampani yayidayisa ngempela izingubo zabafana.
Inkampani ethengisa izimpahla zamapayipi ukhombise izinto zokusesha zokuthenga.
Esinye sezitolo ezikhulu kakhulu eziku-inthanethi sikhonjisiwe PET. Okubi kakhulu, bheka i-URL yokubonisa. Ngabe i-patio ihlobene kanjani nesilwane sasekhaya, noma ngisho nezincwadi?
Izibonelo ezinjalo zivame ukutholakala kalula uma wenza ukusesha okumbalwa ngamagama angukhiye avamile. Bese futhi, kanye ngesikhashana, uzothola igugu kusesho oluthe xaxa lapho ungalulindelanga.
Ngazo zonke izindlela, sebenzisa Ukuzenzakalelayo kwe-PPC lapho udinga ukonga emandleni, kepha ungakwenzi ngokungcolisa ukusebenza kahle. Lapho imikhankaso yakho ye-PPC ingalungiselelwe kahle, uzophela Amagama Amagama Angukhiye e-PPC aHlelekile.
Izindaba ozibonile ziyiqiniso; kusulwe amagama ezinkampani kuphela ukuvikela abangazi.
Tags: i-ad automationezishintshayoAmagama angukhiyei-automation yesikhangiso ekhokhelweukusesha okukhokhelweokuzenzakalelayo search searchppci-ppc ezishintshayo
Ukuboniswa Kwemininingwane Okubonwayo: Omniture vs Webtrends